12.07.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 22.02.86 Om Shanti Madhuban
रूहानी सेवा – नि:स्वार्थ सेवा
आज सर्व आत्माहरूका, विश्व कल्याणकारी बाबाले आफ्ना सेवाधारी, सेवाका साथी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सुरुवात देखि बापदादा सँगसँगै सेवाधारी बच्चाहरू साथी बने र अन्त्यसम्म पनि बापदादाले गुप्त रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा बच्चाहरूलाई विश्व सेवाको लागि निमित्त बनाउनुभयो। सुरुवातमा ब्रह्मा बाबा र ब्राह्मण बच्चाहरू गुप्त रूपमा सेवाको लगि निमित्त बने। अहिले सेवाधारी बच्चा शक्ति सेना र पाण्डव सेनाहरूले विश्वको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा कार्य गरिरहेका छन्। सेवाको उमंग-उत्साह अधिकांश बच्चाहरूमा राम्रो देखिएको छ। सेवाको लगन सुरुवातदेखि रहेको छ र अन्त्यसम्म रहने छ। ब्राह्मण जीवन नै सेवाको जीवन हो। ब्राह्मण आत्माहरू सेवा विना जिउन सक्दैनन्। मायाबाट बचाइरहने श्रेष्ठ साधन सेवा नै हो। सेवाले योगयुक्त पनि बनाउँछ। तर कुनचाहिँ सेवाले? एउटा हुन्छ केवल मुखको सेवा, सुनेको सुनाउने सेवा। अर्को हुन्छ मनले मुखको सेवा। सुनेको मधुर बोलीको स्वरूप बनेर स्वरूपद्वारा सेवा, निश्वार्थ सेवा। त्याग र तपस्या स्वरूपले सेवा। हदको कामनाबाट पर निष्काम सेवा। यसलाई भनिन्छ ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जुन केवल मुखको सेवा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ केवल स्वयंलाई खुसी पार्ने सेवा। सबैलाई खुसी पार्ने सेवा मन र मुखले सँगसँगै हुन्छ। मनले अर्थात् मनमनाभव स्थितिले मुखको सेवा गर्नु छ।
बापदादाले आज आफ्ना राइट हेण्ड सेवाधारी र लेफ्ट हेण्ड सेवाधारी दुवैलाई हेरिरहनु भएको थियो। सेवाधारी दुवै हुन् तर राइट हेण्ड र लेफ्ट हेण्डमा अन्तर त हुन्छ नि। राइट हेण्ड सदा निष्काम सेवाधारी हुन्छन्। लेफ्ट हेण्डहरू कुनै न कुनै हदको यसै जन्ममा नै सेवाको फल खाने इच्छाले सेवाको निमित्त बनेका हुन्छन्। तिनीहरू गुप्त सेवाधारी हुन् र यिनीहरू नामधारी सेवाधारी हुन्। अहिले भर्खरै सेवा गर्छन् अहिले भर्खरै नाम हुन्छ– धेरै राम्रो, धेरै राम्रो भनिदिन्छन्। तर अहिले गरे र अहिले नै खाए। जम्माको खाता भएन। गुप्त सेवाधारीहरू अर्थात् निष्काम सेवाधारी हुन्छन्। त्यसैले एउटा हुन्छ निष्काम सेवाधारी, अर्को हुन्छ नामधारी सेवाधारी। गुप्त सेवाधारीको वर्तमान समयमा नाम गुप्त रहे पनि त्यस्ता सेवाधारीहरू सफलताको खुसीमा सदा भरपुर रहन्छन्। कति बच्चाहरूलाई संकल्प आउँछ– हामीले गर्छौ तर नाम हुँदैन। र, जो बाहिर नामधारी बनेर देखाएर सेवा गर्छन् तिनीहरूको नाम धेरै हुन्छ। तर यस्तो होइन, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाउनेवाला हुन्छन् तिनीहरूको दिलको आवाज दिलसम्म पुगेको हुँदैन। छिपेर रहन सक्दैन। तिनीहरूको अनुहारमा, चालचलनमा सच्चा सेवाधारीको झलक अवश्य देखिन्छ। यदि कोही नामधारीले यहीँ नाम कमायो अर्थात् कमायो, खायो यहीँ खतम गर्यो तर पछिको लागि भविष्य श्रेष्ठ भएन, अविनाशी भएन। त्यसैले बापदादाको पासमा सबै सेवाधारीहरूको पूरा खाता छ। सेवा गर्दै जाऊ, नाम होस् यस्तो संकल्प नगर। जम्मा होस् यस्तो सोच। अविनाशी फलको अधिकारी बन। अविनाशी वर्साका लागि आएका हौ। सेवाको फल विनाशी समयमा खायौ भने अविनाशी वर्साको अधिकार कम हुन्छ त्यसैले सदा विनाशी कामनाहरूबाट मुक्त निष्काम सेवाधारी, राइट हेण्ड बनेर सेवामा बढ्दै जाऊ। गुप्तदानको महत्त्व गुप्त सेवाको महत्त्व धेरै हुन्छ। त्यस्तो आत्मा सदा स्वयंमा भरपुर हुन्छ। निश्चिन्त बादशाह हुन्छ। नाम-शानको पर्बाह हुँदैन। यसैमा नै निश्चिन्त बादशाह हुन्छन् अर्थात् सदा स्वमानको तख्तनशीन हुन्छन्। हदको मानको तख्तनशीन होइन। स्वमानको तख्तनशीन, अविनाशी तख्तनशीन, अटल अखण्ड प्राप्तिको तख्तनशीन हुन्छन्। यस्तालाई भनिन्छ– विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कहिल्यै साधारण संकल्पको कारणले विश्व सेवाको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न पछि हट्नु हुँदैन। त्याग र तपस्याले सदा सफलता प्राप्त गरेर अगाडि बढिरहनु छ। बुझ्यौ!
सेवाधारी कसलाई भनिन्छ? सबै सेवाधारी हौ? सेवाले स्थितिलाई डगमग गर्छ भने त्यो सेवा होइन। कत्तिले सोच्दछन्– सेवामा तलमाथि पनि धेरै हुन्छ। विघ्न पनि सेवामा नै आउँछ र निर्विघ्न पनि सेवाले नै बनाउँछ। तर जुन सेवा विघ्न रूप बन्छ त्यो सेवा होइन। त्यसलाई सच्चा सेवा भनिँदैन। नामधारी सेवा भनिन्छ। सच्चा सेवा सच्चा हीरा हुन्छ। जसरी सच्चा हीरा कहिल्यै चमकबाट छिप्न सक्दैन। त्यसैगरी सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा हुन्छ। चाहे नक्कली हीरामा चमक जतिसुकै राम्रो होस् तर मूल्यवान कुन हुन्छ? मूल्य त सच्चाको हुन्छ नि। नक्कलीको त हुँदैन। अमूल्य रत्नहरू सच्चा सेवाधारी हुन्छन्। अनेक जन्मको मूल्य सच्चा सेवाधारीको हुन्छ। अल्पकालको चमक देखाउनेहरू नामधारी सेवाधारी हुन् त्यसैले सदा सेवाधारी बनेर सेवाले विश्व कल्याण गर्दै जाऊ। बुझ्यौ– सेवाको महत्त्व के छ? कुनै कम छैन। हरेक सेवाधारी आ-आफ्नो विशेषताले विशेष सेवाधारी हुन्छन्। आफूलाई कम पनि नसम्झ र फेरि गरेर नामको इच्छा पनि नराख। सेवालाई विश्व कल्याणमा अर्पण गर्दै जाऊ। त्यसै पनि भक्तिमा जो गुप्त दानी पुण्य आत्माहरू हुन्छन् तिनीहरूले यही संकल्प गर्छन्– भन्छन्, सबैको भलाइको लागि होस्। मेरो लागि होस्, मलाई फल मिलोस्। यस्तो होइन, सबैलाई फल मिलोस्। सर्वको सेवामा अर्पण गर्छन्। कहिल्यै आफ्नोपनको कामना राख्दैनन्। त्यसैगरी सर्वका लागि सेवा गर। सर्व कल्याणको बैँकमा जम्मा गर्दै जाऊ। त्यसैले सबै के बन्छौ? निष्काम सेवाधारी। अहिले कसैले महिमा गरेनन् भने पनि २५०० वर्ष तिम्रो महिमा गाउने छन्। एक जन्म कसैले महिमा गरोस् वा २५०० वर्ष महिमा होस्– बढी कुन भयो? त्यो बढी हुन्छ नि। हदको संकल्पबाट पर भएर बेहदको सेवाधारी बनेर बाबाको दिल तख्तनशीन निश्चिन्त बादशाह बनेर, संगमयुगको खुसीलाई, मोजलाई मनाउँदै गर। कुनै सेवाले उदास गर्छ भने सम्झ– त्यो सेवा होइन। सेवाले त उडाउँछ। सेवाले बेगमपुरको बादशाह बनाउँछ। यस्ता सेवाधारी हौ नि? निश्चिन्त बादशाह, बेगमपुरको बादशाह। जसका पछाडि सफलता स्वयं आउँछ। सफलताको पछाडि भाग्न पर्दैन। सफलता उसको पछि-पछि हुन्छ। अच्छा– बेहदको सेवाको योजना बनाउँछौ नि। बेहदको स्थितिले बेहद सेवाको योजना सजिलै सफल हुन्छ। (डबल विदेशी भाइ-बहिनीहरूले एउटा योजना बनाएका छन्, जसमा सबै आत्माहरूले केही मिनेट शान्तिको दान लिनु छ।)
विश्व महादानी बन्ने यो राम्रो योजना पनि बनाएका छौ नि! थोरै समयका लागि भए पनि शान्तिको संस्कारलाई चाहे बाध्यताले, चाहे स्नेहले प्रकट त गर्छन् नि। प्रोग्राम अनुसार नै गरे पनि जब आत्मामा शान्तिको संस्कार प्रकट हुन्छ त्यो शान्ति स्वधर्म त हुँदै हो नि। शान्तिका सागरका बच्चा त हुँदै हुन्। शान्तिधामका निवासी पनि हुन्। प्रोग्राम अनुसार प्रकट भयो भने पनि त्यो शान्तिको शक्तिले तिनीहरूलाई आकर्षित गरिरहने छ। जसरी भन्छन् नि– एकचोटि जसले गुलियो चाखेर हेर्छ पछि चाहे त्यो गुलियो मिलोस्, नमिलोस् तर त्यो चाखेको रसले उसलाई बारम्बार खिचिरहन्छ। त्यसैले यो पनि शान्तिको गुलियो मह चाख्नु जस्तै हो। त्यसैले यो शान्तिको संस्कारले स्वत: नै स्मृति दिलाइरहने छ त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा शान्तिको जागृति आउने छ र यसबाट पनि तिमीहरू सबैले शान्तिको दान दिएर उनीहरूलाई पनि दानी बनाउन सक्छौ। तिम्रो शुभ संकल्प छ– कुनै पनि रीतिले आत्माहरूले शान्तिको अनुभूति गरून्। विश्व शान्ति पनि आत्मिक शान्तिको आधारमा हुन्छ नि। प्रकृति पनि पुरुषको आधारमा चल्छ। यो प्रकृति पनि तब शान्त हुनेछ जब आत्माहरूमा शान्तिको स्मृति आउने छ। चाहे जुन विधिले गरे पनि अशान्तिबाट त पर हुन्छन् नि। एक मिनेटको शान्तिले पनि तिनीहरूलाई अनेक समयसम्मको लागि आकर्षित गरिरहने छ। त्यसैले राम्रो योजना बनाएका छौ। यो पनि कसैलाई अलिकति अक्सीजन दिएर शान्तिको श्वास चलाउने साधन जस्तै हुने छ। शान्तिको श्वासको अभावले वास्तवमा बेहोस भएका छन्। त्यसैले यो साधन, अक्सीजन जस्तै हुनेछ। यसबाट थोरै श्वास चल्न सुरु हुनेछ। कतिको श्वास अक्सीजनले चल्दा चल्दै पछि चल्न पनि थाल्छ। त्यसैले सबैले उमंग-उत्साहले पहिला स्वयं पूरा समय शान्ति हाउस बनेर शान्तिका किरणहरू दिनु छ। तब तिमीहरूका शान्तिका किरणको मदतले, तिम्रो शान्तिका संकल्पले तिनीहरूलाई पनि संकल्प उठ्ने छ र कुनै पनि विधिले गर्नेछन् र तिम्रो शान्तिको प्रकम्पनले तिनीहरूलाई सच्चा विधिसम्म खिचेर ल्याउने छ। यो पनि कसैलाई जो निराश छन् तिनीहरूलाई आशाको झलक देखाउने साधन हुन्छ। निराश भएकालाई आशा पैदा गर्ने साधन हुन्छ। जहाँसम्म हुनसक्छ जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् जसको सम्पर्कमा आए पनि तिनीहरूलाई दुई शब्दमा आत्मिक शान्ति, मनको शान्तिको परिचय दिने प्रयत्न अवश्य गर्नु छ किनकि हरेकले आ-आफ्नो नाम त थप्छन् नै। चाहे पत्र-व्यवहारद्वारा गरून् तर सम्पर्कमा आउँछन् नि। लिस्टमा त आउँछन् नि। त्यसैले जहाँसम्म हुन सक्छ शान्तिको अर्थ के हो, त्यसलाई दुई शब्दमा भए पनि स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गर्नु छ। एक मिनेटमा पनि आत्मामा जागृति आउन सक्छ। बुझ्यौ! योजना त तिमीहरू सबैलाई पनि मन परेको छ नि। अरूले केवल काम सक्छन्, तिमीहरूले काम गर्छौ। जब हौ नै शान्तिका दूत त्यसैले चारैतिर शान्तिका दूतहरूको यो आवाज गुञ्जिने छ र शान्तिका फरिश्ताहरू प्रत्यक्ष हुँदै जानेछन्। केवल आपसमा यो सल्लाह गर्नु– पीसको अगाडि कुनै यस्तो शब्द होस् जुन दुनियाँको भन्दा अलिकति बेग्लै लागोस्। पीस मार्च वा पीस यो शब्द त दुनियाँले पनि प्रयोग गर्छन्। त्यसैले पीस शब्दको साथमा कुनै विशेष शब्द होस् जुन सर्व विश्वव्यापी पनि होस् र सुन्दा पनि लागोस् यिनीहरू बग्लै हुन्। त्यसैले अनुसन्धान गर्नु। बाँकी राम्रा कुरा छन्। कम से कम जति समयसम्म यो प्रोग्राम चल्छ, त्यति समयसम्म जे सुकै होस्– स्वयं न अशान्त हुनु छ, न अशान्त गर्नु छ। शान्तिलाई छोड्नु छैन। पहिला त ब्राह्मणहरूले यो प्रतिज्ञा गर्छौ नि! जब तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गराउँछौ भने पहिला ब्राह्मण आफूले प्रतिज्ञा गर्नु पर्छ तब अरूलाई प्रतिज्ञा गराउन सक्छौ। जसरी गोल्डन जुबलीमा सबैले के संकल्प गर्यौ? हामी समस्या स्वरूप बन्दैनौ, यही संकल्प गर्यौ नि। यसैलाई बारम्बार ध्यान दिइराख्नु छ। यस्तो होइन समस्या बन्ने अनि भन्ने समस्या स्वरूप बन्दिन। त्यसोभए यो प्रतिज्ञा गर्न राम्रो लाग्छ नि? पहिला स्व पछि विश्व। स्वको प्रभाव विश्वमाथि पर्छ। अच्छा।
आज यूरोपको पालो हो। यूरोप पनि धेरै ठूलो छ नि। जति ठूलो यूरोप छ त्यति नै बडा दिल भएका छौ नि। जसरी यूरोप विस्तार भएको छ, जति विस्तार भएको छ त्यति नै सेवामा सार छ। विनाशको साधन कहाँबाट निस्कियो? यूरोपबाट निस्कियो नि! त्यसैले जसरी विनाशका साधन यूरोपबाट निस्किए त्यसैगरी स्थापनाको कार्यमा विशेष यूरोपबाट आत्माहरू प्रख्यात हुनु नै छ। जसरी पहिला बमहरू गुप्त रूपमा बनाइए, पछि कार्यमा ल्याइयो। त्यसैगरी यस्ता यस्ता आत्माहरू पनि तयार भइरहेका छन्, अहिले गुप्त छन्, प्रख्यात पनि भइरहेका छन् र हुँदै पनि रहनेछन्। जसरी हरेक देशको आ-आफ्नो विशेषता हुन्छ नि, त्यसैगरी यहाँको हरेक स्थानको आफ्नो विशेषता छ। नाम प्रख्यात गर्नको लागि यूरोपको यन्त्र काममा आउने छ। जसरी विज्ञानका यन्त्रहरू काममा आए त्यसैगरी आवाज सशक्त गर्नको लागि यूरोपबाट यन्त्रहरू निमित्त बन्नेछन्। नयाँ विश्व तयार गर्नको लागि यूरोप नै तिम्रो मदतगार बन्ने छ। यूरोपका चीजहरू सदा मजबुत हुन्छन्। जर्मनीका चीजहरूलाई सबैले महत्त्व दिन्छन्। त्यसैगरी सेवाको लागि निमित्त महत्त्वपूर्ण आत्माहरू प्रत्यक्ष भइरहनेछन्। बुझ्यौ? यूरोप पनि कम छैन। अब प्रत्यक्षताको पर्दा खुल्न सुरु भइरहेको छ। समयमा बाहिर आउने छ। राम्रो छ, थोरै समयमा चारैतिर राम्रो विस्तार गरेका छौ, रचना राम्रो रचेका छौ। अहिले यो रचनालाई पालनाको पानी दिएर मजबुत बनाइरहेका छौ। जसरी यूरोपका स्थूल चीजहरू मजबुत हुन्छन् त्यसैगरी आत्माहरू पनि विशेष अचल, अडोल र मजबुत छन्। प्यारले मेहनत गरिरहेका छौ त्यसैले मेहनत, मेहनत लाग्दैन, सेवाको लगन पनि राम्रो छ। जहाँ लगन हुन्छ त्यहाँ विघ्न आए पनि समाप्त हुन्छ र सफलता मिलिरहन्छ। त्यसो त पूरा यूरोपको अवस्था हेर्दा धेरै राम्रो छ। ब्राह्मण भी. आई. पी. छन्। भी. आई. पी. हौ त्यसैले यूरोपका निमित्त सेवाधारीहरूलाई अझ स्नेहभरि श्रेष्ठ पालनाले मजबुत बनाएर विशेष सेवाको मैदानमा ल्याउँदै गर। त्यसो त धरती फल दिने खालको छ। यो त विशेषता छ, बाबाको बन्नासाथ अरूलाई बनाउन थाल्छौ। हिम्मत राम्रो राख्छौ र हिम्मतको कारणले नै यो गिफ्ट मिलेको छ जसकारणले सेवाकेन्द्रले वृद्धि पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। गुणस्तर पनि बढाउनु छ र संख्या पनि बढाउनु छ। दुवैको सन्तुलन होस्। गुणस्तरको शोभा आफ्नो हुन्छ र संख्याको शोभा फेरि अर्कै हुन्छ। दुवै चाहिन्छ। केवल गुणस्तर भयो र संख्या भएन भने सेवा गर्नेहरू थाक्छन् त्यसैले दुवै नै आफ्नो-आफ्नो विशेषताले कामका छन्। दुवैको सेवा जरूरी हुन्छ किनकि ९ लाख त बनाउनु छ नि। ९ लाखमा विदेशबाट कति भएका छन्? (५ हजार) अच्छा– एउटा कल्पको चक्र त पूरा गर्यौ। विदेशलाई लास्ट सो फास्टको वरदान छ त्यसैले भारत भन्दा तीव्र जानु छ किनकि भारतलाई धरनी बनाउन मेहनत लाग्छ। विदेशमा सुक्खा जमीन छैन। यहाँ पहिला गलतलाई सही बनाउनु पर्छ। त्यहाँ गलत सुनेकै हुँदैनन् त्यसैले गलत कुरा, उल्टो कुरा नसुनकोले सफा हुन्छन्। तर यहाँकालाई पहिला लेखेको मेटाउनु पर्छ अनि लेख्नु पर्छ। विदेशकालाई समय प्रमाण वरदान छ लास्ट सो फास्टको, त्यसैले यूरोपले कति लाख तयार गर्छौ? जसरी यो मिलियन मिनेटको प्रोग्राम बनाएका छौ त्यसैगरी प्रजाको लागि बनाऊ। प्रजा त बन्न सक्छन् नि। मिलियन मिनेट बनाउन सक्छौ भने मिलियन प्रजा बनाउन सक्दैनौ? अझ एक लाख कम ९ लाख मात्र भनिएको छ! बुझ्यौ– यूरोपवालाले के गर्नु छ? छिटोछिटो तयार गर। अच्छा– डबल विदेशीहरूको डबल भाग्य छ। सबैलाई डबल मुरली सुन्न मिल्छ। तिमीहरूलाई डबल मिल्यो– सम्मेलन पनि देख्यौ, गोल्डन जुबली पनि देख्यौ। बडी-बडी दादीहरूलाई पनि देख्यौ। गंगा, जमुना, गोदावरी, ब्रह्मापुत्रा सबै देख्यौ। सबै बडी-बडी दादीहरूलाई देख्यौ नि! एक-एक दादीहरूको एक-एक विशेषता सौगातमा लिएर गयौ भने सबैका विशेषता काममा आउनेछन्। विशेषताहरूका सौगातका झोली भरेर जानु। यसमा भन्सारले रोक्दैनन्। अच्छा!
सदा विश्व कल्याणकारी बनेर विश्व सेवाको निमित्त सच्चा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माहरू, सदा सफलताको जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्ने विशेष आत्माहरू, सदा स्वको स्वरूपद्वारा सबैलाई स्वरूपको स्मृति दिलाउने समीप आत्माहरू, सदा बेहदको निष्काम सेवाधारी बनेर उड्तीकलामा उड्ने, डबल लाइट बच्चाहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
आफ्नो फरिश्ता रूपद्वारा गति-सद्गतिको प्रसाद बाँड्ने मास्टर गति-सद्गति दाता भव
वर्तमान समयमा विश्वका अनेक आत्माहरू परिस्थितिवश चिल्लाइरहेका छन्, कोही महंगीले, कोही भोकले, कोही तनको रोगले, कोही मनको अशान्तिले.... सबैको दृष्टि टावर अफ पीस तर्फ गइरहेको छ। सबैले पर्खिरहेका छन्– हाहाकारपछि जयजयकार कहिले हुन्छ भनेर। त्यसैले अब आफ्नो साकारी फरिश्ता रूपद्वारा विश्वको दु:ख दूर गर, मास्टर गति सद्गति दाता बनेर भक्तहरूलाई गति र सद्गतिको प्रसाद बाँड।
बापदादाको प्रत्येक आदेशलाई प्राक्टिकलमा ल्याउनेहरू नै आदर्श स्वरूप बन्छन्।